Ugile izimanga umfundi waka-Grade 7 | News24
Ugile izimanga umfundi waka-Grade 7
ISITHOMBE: sithunyelweUSakhile Zondi nezindondo zakhe kanye nothisha bakhe emcimbini wokuklonyeliswa.
UMFUNDI osasemncane obekade enza ibanga lika-Grade 7 esikoleni samabanga aphansi, i-W.A Lewitt Primary School, uthi kubalulekile ukuthi ufunde uzimisele kusaqala unyaka ungaze ulinde izivivinyo zokuphela konyaka ukuze unyuse amasokisi.
USakhile Zondi (13) wenze ezibukwayo njengoba ehlomule ngezindondo eziyishumi ngesikhathi kunomcimbi wokuklomelisa abafundi abenze kahle ezifundweni zabo.
USakhile, noyokwenza u-Grade 8 eRaisethorpe Secondary School ngonyaka ozayo, uthi ujabule kakhulu ngokuphumelela kwakhe kanti futhi kuyizithelo zakhe zokusebenza kanzima.
“Bengazi kona ukuthi kukhona engizokuthola ngoba kusukela ebuncaneni bami bengiloku ngenza kahle vele ezifundweni zami, ukuthi nje bengingalindele ukuthi sengingaze ngithole imiklomelo eminingi kangaka.
“Ngijabulile kakhulu kangangokuba ekuqaleni ngangingakholwa ukuthi imina ngempela umnikazi wemiklomelo kodwa manje sengiyakholwa.
“Into engisize kakhulu ukuthi ngikwazi ukwenza kahle kangaka ezifundweni zami ukuthi isikhathi sami esiningi bengisichitha ngifunda kunokudlala kanti futhi ngiqale ukuzimisela usaqala nje unyaka.
“Ngiyafisa ukuthi nabanye abafundi basebenze kanzima nangokuzikhandla ukuze bezokwazi ukuthi baphumelele. Kumele wazi ukuthi yini into oyifunayo empilweni ubheke kakhulu kuleyonto, ugweme ukuba nabantu abafuna ukukwenzisa izinto ezingalungile eduze kwakho, bese usebenza kanzima,” kubeka yena.
Ubhuti wakhe omdala, uMnu Andile Ngwenya, uthe bayaziqhenya kakhulu ngoSakhile kanti futhi bamufisela okuhle kodwa ekusaseni lakhe.
“Usekhombisile ukuthi uyingane ezaziyo ukuthi ifunani kanti futhi siyajabula kakhulu ngokwenza kwakhe kahle.
“Kuningi asekuhlomulile ngenxa yikuzimisela kanti siyacela kuNkulunkulu ukuthi nje aqhubeke amuphe amandla okukwazi ukuqhubeka asebenze kanzima,” kubeka yena.